Mila Politika Azo Tsapain-tànana Ny SIDA Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Mila Politika Azo Tsapain-tànana Ny SIDA Ao Shina
Voadika ny 03 Marsa 2013 5:55 GMT
Voatery nanafina ny mahazo azy mba hahazoana ny fandidiana ny homamiadan'ny havokavoka ny olona iray mitondra ny otrikaretina VIH tao Tianjin. Vantany vao nasehon'i Li Hu ankarihary ity raharaha ity, i Li Hu izay mpisolovava amin'ny VIH/SIDA, nandritry ny herinandro nisian'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny VIH/SIDA, ary niteraka akony tena nanaitra tokoa tao Shina sy nahasarika ny sain'ireo Shinoa mpitantana vaovao.
Ny 26 Novambra 2012, teo anatrehan'ny Kômisiôna ao amin'ny Filankevi-panjakana, i Li Keqiang, Praiminisitra vaovao ao Shina, dia nanao antso mba hanaovana ezaka misimisy kokoa ho an'ny ady amin'ny VIH/SIDA. Nihaona taminà vondrona tsy miankina amin'ny Governemanta ihany koa i Li ary nanome toky fa hampidina ny hetra ho an'ireo ONG misahana ny VIH/SIDA.
An-tendro-molotra fotsiny ve sa politika azo tsapain-tànana?
Nametaka ity sary ity ny Firenena Mikambana ny 1 Desambra, Andro Iraisam-pirenena Hiadiana amin'ny SIDA ao amin'ny bilaogy kiritikan-dry zareo amin'ny teny Shinoa.
I Peng Liyuan, vadin'i Xi Jinping, ilay Filoham-pirenena Shinoa andraindraina ho avy, dia nandany taona maro tamin'ny fanohanana ny ady amin'ny VIH ary voatendry ho Ambasadaoron'ny Faharisiham-po ho an'ny VIH/SIDA sy ny toberkilaozy. Eny fa na dia ONG maro ao an-toerana sy mpanao fihetsiketsehana maro aza no nivondrona mba hijerena ny lafi-tsaran'ny fihetsiky ny mpitantana amin'ny fanentanana momban'ny SIDA, dia maro ihany no mbola misalasala amin'ny fahafaha-manao sy ny fahefana ananan'ny governemanta. Kanefa, mbola mampisalasala ny fahaiza-manaon'i Li Keqiang taorian'ny fampiharihariana ny hadisoana goavana teo amin'ny sehatry ny asany [zh]: fony mbola Governora i Li ny taona 1990, dia nanandrana ny hanafina ny fielezan'ny tsimokaretina VIH izy, izay hita taratra avy tamin'ny tetikasa “fanomezan-dra” notohanan'ny Governemanta.
Hu Jia, mafana fo amin'ny resaka SIDA sy ny tontolo iainana , izay nomelohana 3,5 taona an-tranomaizina tamin'ny asa fisoloana vava nataony ny taona 2008, dia mino fa an-tendro-molotra fotsiny ihany ny asan'ny Governemanta Shinoa ho an'ny Andro Iraisam-pirenena Hiadiana amin'ny SIDA [zh]:
@hu_jia Ny andron'ny 1 Desambra irery ihany ao Shina no an'ny mararin'ny VIH. Manao asa be sy fisehosehoana be ny Governemanta amin'io andro miavaka io, isan-taona. Li Keqiang no tompon'andraikitra tanteraka tamin'ny fanafenana ny areti-mifindra VIH/SIDA sy ireo olona mitondra azy. Taona maro, nitoerana teo amin'ny State Council AIDS Working Committee Office na Vaomiera Manokana Misahana ny SIDA i Li, kanefa na dia ny famatsiana tokony nomena ireo ankizy mitondra ny VIH aza tsy nataony akory.
Fomba fiasa iray hampiroboroboana ny ONG misahana ny SIDA
Milaza [zh] ny China Daily fa manodidina ny 1.000 ny vondrom-pikambanana ao Shina nanokan-tena hiady amin'ny VIH/SIDA, kanefa ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mbola voasoratra anarana mazava ao anaty lisitra ary manao asa ivelan'ny lalàna. Ary dia mbola tsy afaka ny handray tombontsoa avy amin'ny Governemanta aloha ireo ONG ireo hatreto, izay ny ankamaroany dia miankin-doha tanteraka amin'ny fanampiana, indrindra fa avy any ivelany. Kanefa na dia izany aza , mila rafitra matipaika ny fampivoaran'ny sehatry ny ONG. Izany no antony mahadiso fanantenana ireo sasany mpisera ety anaty aterineto noho ny tsy firaharahiana [zh]:
@鹅湖龙少: Asanareo ny fametrahana rafitra iray! Nahoana no manasarotra fiainana fotsiny amin'ny fitongilànana e?
Manam-pahaizana mafana fo amin'ny SIDA i Wan Yanhai, izay nitsoaka tany Etazonia ny volana May 2010 noho ny tahotra ny fanenjehana ara-politika, no nanamarika fa:
@万延海2012 Tena ilaina ny mametraka rafitra iray. Mila rafitra iray azony ampidirina eo amin'ny lafim-piainany ny tsirairay. Mila mametraka rafitra ny filàn'ny tsena ary ny governemanta mila manokana tetibola sy fomba fanaraha-maso. Tokony hampihatra ny andraikitra nofaritan'ny lalàna taminy ny sekoly sy ny haino aman-jery ka samy hiantsoroka ny andraikitra fisorohana ny VIH/SIDA. Tsy ho lasa lavitra aloha raha ny teny sy ny fangatahana fotsiny ihany no atao.
Ilaina ny politika sy fanabeazana manohitra ny fanavakavahana:
Araka ny tatitra nataon'i Xinhua [zh], toy ny tamin'ny taona lasa, dia miisa 346,000 ireo fantatra fa mitondra ny tsimokaretina VIH sy mararin'ny SIDA, na dia novinavinaina ho 780.000 aza ny isa amin'izao fotoana izao. Noho ny indro kely ara-drafitra anefa, dia maro ireo mararin'ny VIH/SIDA no misedra fanilikilihan'ireo mpitsabo. Maro ireo mpitsabo no manao ny hopitaly voatokana ho ala-olana fotsiny ary manilika any amin'izy ireny ny andraikiny amin'ireo mararinny VIH/SIDA any an-toerana. Kanefa, efa matetika tsym araka ny tokony ho izy, no tsy ampy fahaiza-manao amin'ny fandidiana lehibe ireo hopitaly voatokana . Nandritra izay, dia tsy afaka niantohana ny fandriampahaleman'ireo mpitsabo satria tsy nisy fepetra napetraka mialoha ho fisorohana. Ankoatry ny fampandrosoana ny sehatry ny ONG, maro no mino fa tena ilaina ny politika sy fanabeazana manohitra ny fanavakavahana [zh]:
@孟林de小屋 Tsy momba ny fanavakavahana ara-pahasalamana amin'ny resaka fandavana fandidiana ihany ny fisorohana ny VIH/SIDA. Ny dingana manaraka dia ny miady amin'ny fanavakavahana apetraky ny rafitra. Maro ireo mararin'ny VIH/SIDA no voahavakavaka eo amin'ny sehatry ny fitadiavana asa, ireo “Mpiasam-Panjakana Miasa amin'ny Seha-pitsaboana” ohatra, dia misakana ny mararin'ny VIH/SIDA tsy hiasa ao amin'ny Governemanta. Ka tsy milaza ve izany fa ny Governemanta mihitsy no tena fositra amin'ny fanavakavahana ireo mitondra ny aretina VIHSIDA? Amin'ny fomba ahoana moa no hialàn'ny vahoaka amin'ity fanavakavahana ity raha ny Governemanta mihitsy aza no lohany amin'izany? Mila ena atao matipaika sy hentitra tsara ny politika iray hiadiana amin'ny fanavakavahana ireo mitondra ny VIH/SIDA.
@艾滋病人肖剑-大悲咒: Resaka endrika fotsiny no tena olana mikasika ilay rafitra . Ny fanavakavahana ara-piarahamonina no tena fototra izay mampitohana ny olana noho ny tsy fahampian'ny fahatsapantena. Etsy ankilany, dia tompon'andraikitra feno sy tanteraka amin'ny olana misy ankehitriny ny Governemanta sy ny haino aman-jery. Noho ny fampielezan-kevitra mampatahotra ataon'ny Governemanta anefa izany, izay manome vahana ny tahotra eo amin'ny fiarahamonina ary mamahan-dalitra ny olona tsy mahalala. Efa nampiasaina an-taonany maro ity karazanà fampielezan-kevitra Shinoa ity ary efa an-taonany maro ihany koa no tsy nahomby.
@数码-兔子: Mifono hevitra ara-moraly ny adihevitra momba ny VIH/SIDA. Heverina ho nanao firaisana ara-nofo tsy voaaro ireo mitondra ny tsimokaretina VIH. Marary lavitra noho ny fanaintainan'ny aretina entiny anefa ny tsndry ara-maoraly takiana amin'ireo marary ireo. Ny maoraly ambony be afaka hamotika olona iray, indrindra indrindra ao Shina.